श्रीमतीलाई रंगेहात पक्रा;उ गर्न श्रीमान ६ घण्टा खाटमुनी लुकेका थिए, जब यस्तो दृष्य देखे भयो नसोचेको घटना ! (भिडियो हेर्नुस्) – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/श्रीमतीलाई रंगेहात पक्रा;उ गर्न श्रीमान ६ घण्टा खाटमुनी लुकेका थिए, जब यस्तो दृष्य देखे भयो नसोचेको घटना ! (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमतीलाई रंगेहात पक्रा;उ गर्न श्रीमान ६ घण्टा खाटमुनी लुकेका थिए, जब यस्तो दृष्य देखे भयो नसोचेको घटना ! (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । ८ वर्ष अघि विवाह गरेका भरतकुमारलाई आफ्नो श्रीमतीको अरु कसैसंग पनि सम्बन्ध छ भन्ने शंका थियो । उनी श्रीमतीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न चाहन्थे ।
त्यो समय एक दिन आयो । उनले श्रीमतीको प्रेमीलाई संसारवाटै विदा गरिदिए । यो घटना भारतको बंगलोरमा भएको हो । श्रीमतीलाई रंगेहात पत्ता लगाउन उनी कार्यालयवाट आएपछि आफ्नो कोठाको खाट मुनी लुकेर बसे । श्रीमतीले थाहा नपाउने गरी उनी खाटमुनी लुकेर बसेका थिए । उनी पेशाले सिकर्मी थिए ।
शिवराज दिउँसोतिर घर आइपुगे र भरत लुकेको ओछ्यानमा सु ते। भरत अझै पनि त्यहाँबाट हटेनन् र तिनकी श्रीमती पनि त्यहीं थिइन् । जव साँझ परेपछि भरतको श्रीमती शौचालयमा गइन्, भरतले बाहिरबाट शौचालयको ढोका बन्द गरे र शिवराजलाई च क्कु ले प्र’हा र गरे । शिवराजको घटनास्थलमै निधन भयो ।
भरतको आठ बर्ष अघि विवाह भएको थियो। उही शिवराज र भरतकी श्रीमती एक समय साथी थिए । शिवराजले भरतकी श्रीमतीलाई प्रेम प्रस्ताव गरेका थिए, तर भरतकी श्रीमतीले इन्कार गरिन् । यद्यपि शिवराजको निरन्तर प्रयास पछि भारतकी पत्नी पनि गोप्य सम्बन्धका लागि राजी भइन्। **समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**